Cnc basa - China Ruizheng Industry
Tinogona kubata mhando dzose zvakarurama zvikamu sezvo muzana yeGmail.END_STRONG chinodiwa. Excellent basa, nenguva pakukurukura. OEM mugadziri pamwe high quality, makwikwi mutengo. 1.Product Kukura: machine pfupi miseve zvikamu, pfupi muchina miseve, azvikuya zvikamu, nendarira zvakarurama miseve muchina zvikamu, zvakarurama zvikamu, mhangura akatendeuka migove, CNC azvikuya uye wekushanduka zvikamu. 2.Material: Carbon simbi, Stainless simbi, aruminiyamu, nendarira, ndarira, mhangura, vakasununguka nokuveza simbi, kana maererano vatengi chikumbiro. 3.Processi ...
Tinogona kubata mhando dzose zvakarurama zvikamu sezvo muzana yeGmail.END_STRONG chinodiwa.
1.Product Kukura: machine pfupi miseve zvikamu, pfupi muchina miseve, azvikuya zvikamu, nendarira zvakarurama miseve muchina zvikamu, zvakarurama zvikamu, mhangura akatendeuka migove, CNC azvikuya uye wekushanduka zvikamu.
2.Material: Carbon simbi, Stainless simbi, aruminiyamu, nendarira, ndarira, mhangura, vakasununguka nokuveza simbi, kana maererano vatengi chikumbiro.
3.Processing muchina: CNC muchina, machine centre, kukuya muchina, kwakajairika lathe muchina, azvikuya muchina, Drilling muchina, waya nokuveza muchina, otomatiki bhaa muchina, Swiss screws muchina.
4.Finishing: zingi yakanamirwa pamifananidzo, nickel yakanamirwa pamifananidzo, Chrome yakanamirwa pamifananidzo, phosphating, makorari, nyaya kuomesa, carburization nokuomesa, anodizing, dema oxide.
5.Testing Zvivako: fungidziro muchina, roughness tester, zvakaoma tester, concentricity Esteri.
6.Package: Inner mapurasitiki bhegi, rokunze atorwa, crate, kana iri kudiwa.
7.OEM kugamuchira: ne ruzivo rwokugadzira mainjiniya uye ano kuongorora midziyo, fekitari kwedu kunogona kukubatsira kuderedza mutengo pamwe high quality.
Yaiva Dongguan China, tiri mugadziri anenge specialized pakupa machine basa maererano vatengi 'chikumbiro uye Specification vanodhirowa, kana chiduku kana chikuru kwazvo zvinobvumidzwa kwatiri
Previous: Tendeukai chigayo centre
Next: Sheet simbi Fittings
Metal tsikwa basa
Custom simbi machine
Zvakarurama zvikamu nokutengesa